သင့် ဖုန်းက Instagram App Icon ကို ဘယ်လို ပြောင်းမလဲ? – MyTech Myanmar
သင့် ဖုန်းက Instagram App Icon ကို ဘယ်လို ပြောင်းမလဲ?
Instagram ကို ၂၀၁၀ ခုနှစ် အောက်တိုဘာလ ၆ ရက်နေ့မှာ စတင် ဖြန့်ချိခဲ့တဲ့အတွက် အခုတော့ ၁၀ နှစ်ပြည့် မွေးနေ့ အချိန်အခါသမယ ကျရောက်လာပါပြီ။ ဒီ ၁၀ နှစ်အတွင်းမှာ Logo များစွာ ပြောင်းလဲ ဆန်းသစ်ခဲ့ပါတယ်။ Instagram ရဲ့ လက်ရှိ Logo ကို ၂၀၁၆ ခုနှစ် မေလတုန်းက စတင်အသုံးပြုခဲ့တာပါ။
Logo / App Icon မျိုးဆက် ၄ ခုကို Instagram က ပြုလုပ်ပေးခဲ့ပြီး ပထမဆုံး ဗားရှင်းဟာ သက်တမ်း သိပ်မရှည်ခဲ့ပါဘူး။ စတင် ဖြန့်ချိပြီး ၃ ပတ်လောက်အကြာမှာပဲ Icon အသစ်နဲ့ လဲလှယ်ခဲ့ပါတယ်။ Icon အသစ်က နာမည်ကျော် Classic ဒီဇိုင်း ဖြစ်ပြီး သက်တန့်ရောင်တွေ ပါပါတယ်။ ၁ နှစ်လောက်အကြာမှာ Icon အသစ်ကို ပြောင်းသုံးခဲ့ပြီး ၂၀၁၆ ခုနှစ် မေလမှာတော့ တောက်ပတဲ့ လိမ္မော်နဲ့ ခရမ်းရောင်တွေ ပါတဲ့ လက်ရှိ Icon ကို ပြောင်းပေးခဲ့ပါတယ်။
အခုတော့ Instagram က ၁၀ နှစ်ပြည့် မွေးနေ့အထိမ်းအမှတ် အဖြစ် သင်ကြိုက်တဲ့ Logo / App Icon ကို ပြောင်းလို့ရအောင် ပြုလုပ်ပေးလိုက်ပါတယ်။ အောက်တိုဘာလ ၁ လလုံးမှာ ပြောင်းလဲနိုင်မှာ ဖြစ်ပြီး Original , Classic နဲ့ လက်ရှိ Icon ၃ ခုအပြင် နောက်ထပ် Icon ၈ မျိုးထဲက ရွေးချယ်နိုင်ပါတယ်။ Icon အသစ်တွေထဲမှာ အနက်ရင့် ၊ အစိမ်းနဲ့ လိမ္မော်ရောင်တွေနဲ့အတူ လှပတဲ့ Pride Edition လည်း ပါပါတယ်။
အထူးဖန်တီးပေးထားတဲ့ Easter Egg ၁ ခုလည်း ထည့်သွင်းထားပေမယ့် Settings ထဲမှာ ဖွက်ထားတဲ့အတွက် အလင်းပြပေးချင်ပါတယ်။ သင့် Instagram Profile ထဲသွားပြီး Hamburger Menu ထဲက Settings ထဲသွားပါ။ အောက်ကိုဆင်းပြီးရင် အဲဒီ လုပ်ဆောင်ချက်ကို သုံးနိုင်ပါတယ်။ Icon အသစ်တွေ ပြောင်းနည်း ဗီဒီယိုကို အောက်မှာ လေ့လာနိုင်ပါတယ်။
MyTech Myanmar2020-10-08T13:38:39+06:30October 8th, 2020|HowTo, Mobile Phones, Tips & Stories|